‘Sakafo iainako Ny Photoblogging’, Hoy i Edward Echwalu, ilay Ogande Mpakasary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2015 7:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, 日本語, English
Iray amin'ireo sary nopihan'i Edward Echwalus ity zazalahy manosika borety misy daba feno rano ity, tany Andrefan'i Ogandà. Sary nahazoana alàlana
Nalaky lasa famantarana ny resaka fakàna sary sy ny fanoratana bilaogy ao Oganda ny anarana Edward Echwalu. Nandritry ny antsafa manokana niarahana taminy, noresahan'ilay mpandefa sary anaty bilaogy mahazendana tamin'ny Global Voices ny fitiavany maka sary sy ny fanoratana bilaogy.
Prudence Nyamishana (PN): Oviana no nahatsapànao fa tena toy ny rà mikoriana anatinao ny resaka sary ?
Edward Echwalu (EE): toy ny ankizy Ogande rehetra ihany aho taloha, tsy nahalala izay ho asako, eny fa na dia hatrany amin'ny taona faharoa tao amin'ny Anjerimanontolon'i Makerere aza, ary toy ireo maro nanaraka ny Làlam-piofanana Fampitam-baovao ho an'ny daholobe, nanatrika ny fampianarana rehetra aho tamin'ny fanantenana fa eny am-pandehanana eny no mety hahitako izay tena hahaliana ahy.
Indray andro, nisy profesora avy any Etazonia tonga nanao fitsidihana niaraka tamin'ny fakàntsariny ary nandrisika ny ankizy hampivady ny tantara amin'ny sary Niova tanteraka ny fiainako. Avy hatrany dia nanomboka naka sary aho ary dia nahazo fankasitrahana avy amin'ny rehetra. Ny fitiavako naka sary dia nateraky ny filazàn'ny raiko fa aorian'ny fiafaràn'ny enimbolana farany amin'ny fianarako, tsy tokony hitavandra vola avy aminy intsony aho. Fantatro fa tsy maintsy nitady fivelomana aho. Saingy faly aho fa hitako ny zavatra tiako sy nahaliana ahy.
Dingana feno fahasahiana no nataoko, ary tamin'ny saram-pianarako, nandray fiara fitaterana aho ho any Nairobi, Kenya mba hividy fakàntsary. Nolazaina tamiko fa hoe mora ny fakàntsary. Tsy nahafantatra na iza na iza aho saingy tsy nahasakana ahy tsy handeha hividy fakàntsary izany. Tena nientanentana tokoa aho, naka sary izao zavatra rehetra hitako teny an-dàlana izao. Fa nony fantatro fa mila mamoaka ny sary nopihako aho dia nanokatra bilaogy, ary tamin'izany fotoana izany tsy mbola maro ny Ogande no nanana bilaogy. Ampahany tamin'ny fianarako ny fanomezana endrika ara-barotra ka dia nanamboatra karatra ho fandraharahàna aho. Ary talohan'ny nifarànan'ilay enimbolana indrindra, nanasa ahy ny Masoivoho Amerikana nandritry ny fivorian'ireo Tonian-dahatsoratra . Fihaonana manokana niarahana tamin'ireo Tonian-dahatsoratra manana ny lazany avy amin'ireo voaiben'ny fampitàm-baovao io. Mbola mpianatra fotsiny aho teo ary ny hany mba zavatra nanànako dia ny rohy mitroka avy ao amin'ny bilaogiko. Araka izany ny zavatra nataoko niainga tamin'ny fientanentanana/fahataitairana no lasa fotoana namaritra ny fisiako. Ary taorian'izay, naharay mailaka maro aho avy amin'ny olona izay naniry ny hanaovako asa ho azy ireo, isan'ireny ny Daily Monitor izay nandray ahy ho toy ny mpakasary ao amin-dry zareo.
PN: Inona no fotoana tsaroanao ho tsara indrindra tamin'ny naha-mpakasary fanao anaty bilaogy anao (photoblogger)?
EE: Misy maromaro ihany ny fotoan-dehibe fa ny tena tsara indrindra dia ny nandraisako antso avy any Londona fa hoe voasoratra ho isan'ny natolotra ho amin'ny “CNN African Journalism Awards” ny tenako. Tsy hitako izany navaly. Tamin'ny fotoana niarahako tamin'ireo namako teny ambony fiara fitaterana handeha hifety indrindra no niditra ilay antso ka nitenenako tamin-dry zareo fa nanomboka teo ny fety. Sambany mihitsy no nahatsapako hoe nisy olona mba nankasitraka ny asako.
Zava-mahazatra fanao ao Oganda ny jono atao amin'ny alina ampiasàna solitany. Sary nahazoana alàlana.
PN: Inona no fanamby atrehanao amin'ny maha-mpakasary fanao amin'ny bilaogy anao?
EE: Tsy mankasitraka loatra ny fanànana talenta ny olona ao Oganda. Izaho ihany no manosika ny tenako hanao asa tsaratsara kokoa. Tany amin'ny Anjerimanontolo, tsy nianatra zavatra betsaka noho izay maro haiko tamin'ny alàlan'ny Youtube aho.
Lafo be ny fitaovana no sady tsy misy ao Oganda ka tsy hisy hahamarika izay sary izany ny eto raha tsy hoe zava-miavaka angaha ny asa nataonao. Amin'ny asa fanaovana gazety, saiky eny an-dohalaharana hatrany ny mpanao gazety ary mbola ao Oganda ihany, tsy manana fiantohana izy ireny. Nidaroka ahy ny polisy teo ampanatanterahana ny asako, nametraka fitoriana momba ilay tranga niseho aho saingy very an-dàlana fotsiny izany. Tamin'ny 2009, nandritry ny korontana tao Buganda, nisy fifanenjanana teny rehetra teny ary saiky vava-ady daholo izay toerana nitrangàny, nirehitra ny tanàna iray manontolo ary dia niezaka ny hahazo sary tsy misy mpanana araka izay azoko natao aho. Niatrana ny tafika ary nanomboka nitifitra olona – nisambotra ahy sy nidaroka ahy, nentina tany amin'ny tobin'ny polisy aho nokaravasiana. Nefa tsy nisy olona nahita ahy voadaroka. Soa ihany fa nanana fotoana nidirana mivantana avy amin'ny findaiko aho izay ampy tsara nandefasako hafatra ho an'ny tonian-dahatsoratro – izay nandefa kosa indray hafatra ho an'ireo toby fampielezampeo marobe tao Kampala – avy eo ireo miaramila nanomboka nanontany tena hoe iza marina aho ary namotsotra ahy avy hatrany. Avy eo, tamin'ny 2011, nandritry ny hetsika “diabe ho an'ny asa”, tany afovoan-tanàna aho naka sary an'ireo mpanao hetsi-panoherana. Nanao tifi-danitra ho fanairana ny miaramila aloha raha ny nahalalako azy, nisy miaramila iray nitifitra tany amin'ireo olona marobe ary hitako ny tovolahy iray nirijarija teo anoloako maty voatifitra teo amin'ny lohany. Sady nipararetra aho no tezitra. Naka sary maro aho na teo aza ny daroka. Ary ny sisa azoko natao dia ny nitantara ny amin'ilay tovolahy.
PN: Manao ahoana izany hoe Ogande mpakasary fanao am-bilaogy ?
EE: Nanokatra varavarana marobe ho ahy ny fakàna sary fanao am-bilaogy. Manana ny tanjako ao anatin'ny fakàntsariko aho. Fidiako ireo hevitra izay mifandray amin'ny andrasan'ireo manjohy ahy manerantany. Ampiasaiko hanairana ny saina mikasika ireo olana misy ny fanoratana bilaogy. Ohatra ny tantaran'ny nodding syndrome -Soritr'aretina nodding [Eng] notateriko avy any avaratr'i Oganda. Nanahiran-tsaina ahy ilay aretina; toa tsy nisy olona afaka nanome valinteny mikasika azy io ka dia nanapaka hevitra ny handeha ho any avaratr'i Oganda aho ary tena nanohina mafy ahy ny zavatra hitako tany – noraketiko ny zavatra zakain'ny ankizy iray mba ho velona miaraka amin'ilay aretina. Mahasafotra ny valinteny, tonga miaraka amin'izay hevitra heveriny ho fandraisany anjara ny olona, ary hatramin'izay vokany, nisy ny fanentanana hamoriana vola hiatrehana ny “nodding syndrome”. Nitombo be ny fandrakofan'ny fampahalalam-baovao tao an-toerana sy iraisampirenena. Nanampy ahy ny fakàna sary hatao amin'ny bilaogy hilazàna ny tantaran'ny maha-olona izay raha ny hita dia tsy mivoaka velively any amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra. Teny an-dàlana teny, hitako ny toerana tokony hisy ahy, maka sary ho amin'ny fampandrosoana aho ankehitriny ka dia ampiasaiko kokoa ny sary raha oharina amin'ny teny.
PN: Nahita maro tamin'ireo sary mahaliana nalainao aho, izay milaza tantara na dia tsy mbola mamaky ny teny kely fanazavàna azy aza. Ahoana no fomba andraketanao ireny fotoana ireny ?
EE: Mivoaka ho an'ny fihetsehampo aho raha maro kosa ireo mpakasary hatao anaty bilaogy no mandeha noho ny asa. Rehefa mandrakitra fihetsehampo aho dia mahatsiaro ho tretrika mandao ilay toerana. Tsy mora velively ny misambotra ny fihetsehampo fa mila faharetana, fotoana ary fahazàrana. Tsy maintsy anananao ampy tsara ny toetra maha-olona hilazàna ilay tantara amin'ny maha-mpakasary fanao am-bilaogy anao. Mila mahatsapa izay tsapan'ny olona ianao, miaraka amin'ilay aretina “nodding syndrome”, tezitra aho nahatsapa hoe mendrika zavatra tsaratsara kokoa ny ankizy.
PN: Inona no mbola manosika anao hanohy raha ny zavatra rehetra mikorosy?
EE: Sakafo iainako Ny Photoblogging (fakàna sary hatao amin'ny bilaogy). Tsy manana birao hita vatàna aho. Mamporisika ny mpanao gazety hitozo amin'ny fakàna sary hatao amin'ny bilaogy aho fa ny azoko aminà tetikasa iray dia 98% amin'izay azoko herintaona aminà asa raikitra iray atao isanandro. Notapahako ny hevitra fa ny ora maro nomeko ny mpampiasa ahy dia hatontoko ho an'ny asako, tsapako fa mbola mila milaza ny tantara tsara indrindra eo amin'ny fiainako aho – tsy mahatsapa ho toy ny efa nahazo ny sary tsara indrindra tamin'izay nopihako aho. Ary nandritry ny fotoana ela, tsy mba zatra nandray dokadoka. Indraindray rehefa mampitaha ny tenako amin'ireo hafa mpaka sary manerana izao tontolo izao aho dia fantatro fa tsy mbola ao tsara ka mila manosika ny tenako hihoatra ny fetra.
Eny, tena mafy ny fotoana rehefa ilay izaho trotraka ara-tsaina iny eo am-piasàna. Tsapako ho tsy misy fiantraikany ny asako. Niresaka tamin'ny mpanoro hevitra ahy aho izay nilaza tamiko haka bàhana kely sy voalohany indrindra teo amn'ny asako, hiato mandritry ny volana iray manontolo, ary dia tsy nanapika fakàntsary mihitsy aho. Tsy naka sary aho na iray aza ary tsy nitondra fakàntsary na smartphone. Nandeha tany ambany ravinkazo. Nikitikitika ahy nanerana ny làlana ny fakàmpanahy saingy nampiasaiko io vanim-potoana io mba ho teboka fanombohana ny fiainako ka rehefa tapitra ilay iray volana, feno fahavononana vaovao aho. Avy eo nisy fotoana iray nisy nangalatra ny fitaovako rehetra; ny fakàntsariko rehetra, ny angon-drakitro tanaty kapila mafy, izany hoe ny fiainako manontolo. Toy ny bory tongotra aho. Nandray ireo fankaherezana tsara aho mba hiverenako hijoro tsara indray. Nifandamina ireo namana ary nanao famoriam-bola nahazo hatramin'ny 2000 dolara teo ho eo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao; Brezila, Ghana, Etiopia, Etazonia ary firenena hafa maro. Fotoana iray hafa namaritra ny fiainako izany, satria nanana ny Global Voices aho izay teo nankahery ahy hanohy hatrany.
PN: Inona no azonao lazaina ho an'ny bilaogera izay mila ho kivy na efa niato mihitsy tsy nanohy ny bilaoginy?
EE: Toy ny fanariana aina ny famelàna ny bilaogy. Na inona na inona antony nahatonga anao nanokatra bilaogy, tokony hanohy hatrany ianao. Maro ireo bilaogera no niato satria tsy naharay tamberina loatra, nefa ianao tsy takatrao mihitsy hoe ny bilaoginao mety nanova fiainana iray any ambadimbadika any, na dia ho olona iray aza izay, tsy olana. Indraindray mahakivy antsika ny zavatra tsy dia misy dikany. Aza ampirimina ny fitaovanao; misy olona any miandry ny avy any an'eritreritrao. Tohizo hatrany.
Azo jerena ato ny asan'i Edward.